China Yakapera Mvura Muchero Dice vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Midzi yemichero yemidziyo, yakatemwa kubva pamichero yeprimiyamu yakaomeswa. Inokodzera nzungu dzakasanganiswa, mishonga tii, yakasanganiswa yezviyo mapundu, ice cream yekushongedza uye kubheka.
Yakaoma uye isiri-inonamira, kubheka isina kushanduka, kwete kuomarara pane yakadzika tembiricha, rehydration isina ruvara kupera.
Chibereko chisina mvura chakanakira kudyiwa mukati mezuva, kana kuwedzera kuzvikafu zvekudya senge oatmeal uye quinoa porridge. Muchero unogona kutemerwa mutete (maapuro, mabhanana, sitirobheri, kiwi), kutemwa kuita zvidimbu zvidiki (chinanazi, maapuro), kuruboshwe (raspberries, blueberries), kana pureed uye kuomeswa kuita michero yematehwe.
Muchero wakaomeswa unogona kusimudzira fiber yako uye kudya kunovaka muviri uye nekupa muviri wako huwandu hwakawanda hwema antioxidants.
Maitiro ekuderedza mvura anochengetedza chikafu chekutanga chikafu. Semuenzaniso, maapuro machipisi achave neakaenzana macalorie, mapuroteni, mafuta, makabhohaidhireti, faibha, uye neshuga zvemukati semuchero mutsva.
Vakadzi vanogona kukohwa zvakanakira kubva pamichero yakaomeswa, kunyanya kumapfupa avo. Imhaka yekuti osteoporosis inowanzo rova ​​vakadzi vazhinji kupfuura varume.
Muchero wakaomeswa unogona zvakare kuvandudza hutano hwemwoyo. Ounce yemichero yakaomeswa ine akawanda antioxidants uye faibha pane imwechete ounce yezvibereko zvitsva. Izvi zvinhu zvikamu zvakakosha mukuchengetedza moyo wako uine hutano.
Cranberries yakaomeswa inogona kubatsira kudzivirira kuwanda kweropa. Izvi zvinogona kubatsira mukuchengetedza kweropa risingachinji kubva pamoyo mukati mebo bo
Fekitori Yakagadzirirwa China Chibereko chakaomeswa, Yakachengetedzwa Papaya, Chigadzirwa chimwe nechimwe chakanyatsogadzirwa, chinoita kuti ugutsikane. Zvishandiso zvedu mukugadzirwa kwekugadzira zvakanyatso tariswa, nekuti zvinongokupa iwe mhando yemhando yepamusoro, tiri kuzonzwa tine chivimbo. Yakakwira yekugadzira inodhura asi mitengo yakaderera yekubatana kwedu kwenguva refu. Unogona kuve nesarudzo dzakasiyana siyana uye kukosha kwemarudzi ese kwakavimbika zvakafanana. Kana iwe uine chero mubvunzo, usazeze kutibvunza isu.
Pashure: Hunhu Hwakanaka Hwakaomeswa Mvura Tsvuku Orange - Ropa Orange - Nhaka
Chibereko Chisina Mvura
Kusunungura Akaomeswa Muchero Bulk